Mbido Warwick Castle War nke Warlọ Roses abụọ | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, England
N’akụkụ obodo ebe amụrụ William Shakespeare, Stratford n’elu Avon, bụ Warwick, obodo nke otu n'ime ụlọ ndị ama ama na England maka ọnọdụ nchekwa ya dị mma, nke nwere otu aha.
Na nso nso a, ihe nkiri njem nlegharị anya ọhụrụ ka meghere akpọrọ "The War of the Two Roses" nke na-eweghachi ọgbaghara dị n'etiti ụlọ York na Lancaster na narị afọ nke XNUMX. nke ahụ enyekwala aka n'ịkpali sagas ndị edemede ama ama dịka Game of Thrones.
N'iji ohere a, anyị gaba Warwick ka anyị wee mara nke ọma nnukwu ụlọ a pụrụ iche nke ghọrọ ụdị ogige egwuregwu.
1 Akụkọ Warwick Castle
2 Na-ehi ụra na Warwick Castle
3 Ihe ndị a na-eme n’ime Castle Warwick
4 Agha nke Roses abụọ
5 Ozi nke mmasị
5.1 Otu esi aga Warwick Castle
5.2 Ahịa tiketi
5.3 Oge emepe
Akụkọ Warwick Castle
Na mbido narị afọ nke XNUMX, ụlọ a malitere iwu site na iwu nke Guillermo El Conquistador. Ejiri osisi na ihe ndi ozo na-adighi adighi ike wuo ebe ewusiri ike mbu, ya mere, mgbe otu aro gachara, ewughachi ya na okwute. N’ụzọ dị otu a, Warwick Castle lanarịrị ule nke oge dịka ma ebe ewusiri ike ndị agha na ebe obibi nke onwe. Ka o sina dị, ọ dabaghị na nleghara anya dịka ọ na-adịkarị na nnukwu ụlọ nke ụdị a ma ugbu a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịma mma ọ nwere na mbụ.
Lọ Warwick bụ akara nke ike maka Earls nke Warwick kemgbe e nyere Henry de Beaumont aha ahụ. Onye a kacha mara amara n’usoro ọmụmụ ahụ bụ Richard Neville, nke a na-etu aha Onye kere ndị eze maka ikike ya maka aghụghọ n’obí eze n’oge a na-alụ agha nke Roses abụọ, esemokwu n’etiti ezinaụlọ abụọ nwere ọkaibe na-azọ ocheeze ahụ na ike ya.
Ugbua na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, ndị Tussauds Group nwetara ebe e wusiri ike n'echiche nke ịlaghachi na ndị njem nleta. Iji mee nke a, ha ga-eweghachi ọtụtụ oghere, nke emere nke nta nke nta ruo ugbu a. N'ụzọ dị otú a, ndị njem nleta nwere ike ịga leta ya dị ka a ga - asị na ha na - abanye na Middle Ages: ụlọ elu, ụlọ mkpọrọ, mgbidi, ụlọ nzukọ, ụlọ igwe nri, wdg. A na-eji arịa ụlọ, eserese na ngwa agha edozi ha niile iji mezuo oge ochie.
Na mgbakwunye, Warwick nwere ubi mara mma nke ihe karịrị hekta 25 bụ nke Capability Brown rụpụtara na narị afọ nke XNUMX. Otu n'ime ihe ndị kachasị mma bụ Ogige Ubi.
Na-ehi ụra na Warwick Castle
Ihi ụra na Warwick Castle nwekwara ike ịbụ n'ihi na ha na-enye ohere ahụ ka ha rahụ ụra dịka onye agha n'ụlọikwuu n'ogige e wusiri ike ma ọ bụ dịka nti n'ime ụlọ ndị nnukwu ụlọ. N'oge ọkọchị, site na July 1, ị nwere ike ịga na-enwu n'ụlọikwuu ya ochie, mana maka ndị chọrọ ihe ọzọ mere eme, ha nwere ụlọ ime ụlọ nke Suites.
Ihe ndị a na-eme n’ime Castle Warwick
Tustù Tussauds, otu nke nwere ụlọ ihe ngosi nka a ma ama na London, zụtara ụlọ ahụ site n'oge ahụ ruo mgbe ezinụlọ nwere ya ma malite inye ụlọ ya aka site na nzukọ na ndị isi iji gosi ndị ọbịa ihe ndụ na ụlọ nke njirimara ndị a.
Taa, Warwick na-enye ndị ọbịa ya ọpụrụiche zuru oke. Nnukwu ụlọ ahụ na-adị ndụ site n'aka ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-akọ akụkọ akụkọ, ihe ngosi ochie na ngosipụta, ebe ndị njem nleta, ihe ụmụaka na ebe obibi.
Tụkwasị na nke ahụ, Warwick Castle na-enye ndị njem nleta mmasị ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-ahazi nnọkọ oriri na ọ Victorụ Victorụ Victorian, ngosipụta na nnụnụ ndị na-eri anụ na ncheta akụkọ ihe mere eme dị ka Agha nke Roses abụọ, ihe omume nke a ga-eme site na mmegharịghachi nke ọ joụ na ọgụ oge ochie, n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Agha nke Roses abụọ
Agha nke Roses Abụọ bụ agha obodo nke mere ka ndị otu nke oflọ Lancaster ghara ịlụso ndị nke betweenlọ York agha n’agbata afọ 1455 na 1487. Ezinaụlọ abụọ kwuru na ocheeze England, sitere na ya site na commonlọ Plantagenet, dị ka ụmụ nke Eze Edward III. Aha, War of the Roses Abụọ, e nyere banyere ihe nnọchianya nke ụlọ abụọ ahụ, ọcha ọcha nke York na ọbara ọbara nke Lancaster.
Ihe ngosipụta nke isiokwu a bụ "War nke Roses Abụọ" weghachitere akụkụ nke esemokwu ahụ na ngosipụta dabara adaba maka ndị niile nwere ike ịnụ ụtọ ya site na Mee 25 ruo Septemba 3, 2017. Ọ bụ ihe ngosi ihe eji eme ndụ na ogige ahụ.
Omume ndị ọzọ enwere ike ịme n'oge mma a bụ akụ na-agba ụta na ụta ochie na ọzụzụ maka mma agha. Ọ bụrụ na emere ndokwa ahụ tupu Jenụwarị 31, ọ ga-ekwe omume ịchekwa 30%. Nchịkọta niile gụnyere ịbanye na ngosi ahụ, abalị abalị na nri ụtụtụ.
Ozi nke mmasị
Otu esi aga Warwick Castle
Site London Warwick bụ mfe inweta ụgbọ okporo ígwè. Njem a were ihe kariri otu awa. Ozugbo ahụ, site na ọdụ obodo gaa na nnukwu ụlọ, o siri ike ije obere nkeji. O nwekwara ụgbọ oloko si Birmingham.
Tiketi na Warwick Castle dị site na .7.43 19.80 ruo .XNUMX XNUMX. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwetara ha na ịntanetị anyị nwere ike ịchekwa obere ego.
Warwick Castle mepere site elekere iri nke ụtụtụ. Emechi ụzọ maka ọha na eze na-adabere n'oge nke afọ mana n'oge ọkọchị ọ bụ na 10pm.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Ebe obibi Warwick Castle nke War War nke Roses Abụọ